အားလပ်ရက် – ၂ – (ဟိုဟိုဒီဒီ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Local Guides » အားလပ်ရက် – ၂ – (ဟိုဟိုဒီဒီ)	30
ကိုခင်ခ says: ကိုလုလင်ရဲ့ လက်ရာရိုက်ချက်ကို ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးသေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်အတွက်တော့ ပုံသစ်တွေပါလားလို့—-။
Mလုလင် says: ခရီးလမ်း သာယာ ပါစေဗျာ ..
pooch says: လုလင်ရေ canon ထဲက ခုဈေးချပေးနေတဲ့ ၄ ရောင်လာတယ် ( canon ထဲ ဒီအမျိုးတခုပဲ ၄ ရောင်လာတာ )ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားက ထိုင်ဝမ်မိတ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲ့ဒါလေး ကောင်းမကောင်း သင့်မသင့် ကျမကို တချက်လောက် ပြောပြပေးပါလား။
Mလုလင် says: Canon ထဲက လေးရောင်လာတာ ဆို . 1100D ပဲ ဖြစ်မယ် .. ၄ သိန်း ခွဲ ၀န်းကျင် ထင်ပါတယ် တီတီ ပုရှ် ရေ…။ 12-MP နဲ့ entry level EOS မို့ အားပေးပါတယ်။ sony နဲ့ ဘာကွာလဲ ဆိုတော့ … အဓိက က တော့သုံးတဲ့ လူ ပဲ လို့ ထင်ပါတယ် တီတီ ပုရှ် ရေ .. ကျနော် ကတော့ Canon 1100D လေး အားပေးချင်သား .. Canon ပဲကိုင်ဖူး လို့ Sony အကြောင်းတော့ သိပ်မသိဘူး .. တီတီ ပုရှ် ရေ ..။
pooch says: ဆိုနီအယ်လ်ဖာကလည်း နောက်ဆုံးပေါ်ကို canon ထဲက ဒေါ်လှတထောင်ကျော်ထက်ပိုချိုနေတာမို့မေးကြည့်တာ။ ကျမလည်း သိပ်မသိဘူး။ သူငယ်ချင်းက အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေလို့။ ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ။
Inz@ghi says: ဆိုနီလား …
Mလုလင် says: Local ကို Sony သွင်းတဲ့ သူတွေ ဒီ comment တွေ့ရင် ရင်ထု မယ် … Sony ကို အစဉ်အလာ အရ မကြိုက်ပါဘူး ..ဒါပေသိ … နောက်ပိုင်း မှာတော့မပြောတတ်ဘူး …. လောလော ဆယ်တော့ Canon ပဲဗျို့  ..။
မောင်ပေ says: ဓါတ်ပုံအယူအဆ မသိ နားမလည်ပေမယ့် ပုံအားလုံးကို ကြိုက်တယ်ဗျာ
Mလုလင် says: ကိုပေ ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ .. မန်းလေးရောက်တုန်းက မတွေ့လိုက်ရဘူး .. နောက် တကြိမ် ပေါ့ဗျာ။
အရီးခင်လတ် says: ဒီလို လုလင် ရဲ့ Pro လက်ရာလေးတွေ မတွေ့တာကြာပါပြီကော။
Mလုလင် says: ဖြစ်ရင်တော့ မီးသွေးပဲ .. ဒုတ်ချောင်းကို နေပူလှမ်းပြီး လှမ်းချိတ် တာတဲ့ .. :-( မတော်တဆ များ လျှပ်ကူး သွားမှ .. :-(
MaMa says: မောင်လုလင် လက်ရာတွေ မမြင်ရတာ ကြာပေ့ါ။
သတင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံက ပေးတဲ့ မတ်စိတွေက ခိုင်မာသေချာတာမို့ အပေါ်ဆုံးပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ နောက်ဆက်တွဲ …
နောက်ထပ်ပုံတွေကိုလည်း ကြိုက်မိပြန်ရော။ :D
weiwei says: ဓါတ်ပုံကောင်းတာတွေမြင်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ်ပေါ်လာတယ် …
Mလုလင် says: အန်တီ မမ နဲ့ အန်တီ ဝေေ၀ ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ …။ ခုတလော တော့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ နဲ့ ကင်မရာ တောင် မကိုင်ဖြစ်ဘူး . :-(
kyeemite says: ကင်မလာကို သားသမီးလို တယုတယရှိလှသော
Ma Ei says: မင်းသားကြီးကို လွမ်းလိုက်တာ…
Mလုလင် says: ဦးကြီးမိုက် နဲ့ မအိ ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ … PRO မဟုတ်ပါဘူးဗျာ .. လေ့လာနေတုန်းပါ။ ဦးပိန် တံတား ပုံက ရွှေမင်းသား နဲ့ တူတူ ရိုက်ခဲ့တာပါ။
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ပုံလေးတွေ လက်ရာ မိုက်တယ်နော်…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လုလင်
Mလုလင် says: မင်းကွန်း ပုံ တစ်ပုံ ပါတယ် နော်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကျုပ်ကတော့ ..
Shwe Ei says: ၀ီရိယကိုကြိုက်ပါတယ်ကိုလုရေ။ နံနက်ခင်းရဲ့ရနံ့ကိုမခံစားရတာကြာပေါ့။ အိပ်ပုပ်ကြီးလာလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 286
Phaung Phaung says: Mr.Photographer ရဲ့ပုံတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်…. နာမည်လေးတွေပါပေးထားတော့ ဓါတ်ပုံတွေကအသက်ပိုဝင်တယ်…။
Mလုလင် says: ခပ်မိုက်မိုက် အံစာအိအိဖောင်း ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ … ၀ီရိယ ပုံက မန်းလေး ပုသိမ်ကြီးဘက် မနက် ၇ နာရီ ၀န်းကျင် မှာရိုက်ထားတာပါ။
ကိုရင်စည်သူ says:ှဆရာလုကတော့ ဆရာလုပါပဲဗျား…
ခံစား ကြည့်ရှူ့သွားပါတယ်.. ဆရာလု ခင်ည.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1459
Mလုလင် says: ကျေးဇူးပါ ကိုရင်.
ဦးဦးပါလေရာ says: လှည်းယာဉ်လေးက တမင်ဆင်ရိုက်ထားသလိုတောင်အောက်မေ့ရတယ်..။
Mလုလင် says: မင်းကွန်းဘက် က ပုံက က အမှတ်တရ ပါ .. အဲ့ဒီ့ ဘက် သွားတဲ့နေ့ နဲ့ အလှူရှိတဲ့နေ့ တိုက်ဆိုင် သွားလို့ ဒီလိုပုံမျိုးရတာပါ။ ဦးပေါက်၊ ဦးစိန်သော့ နဲ့ ကျွန်တော် ပေါင်း ၃ ယောက် ရိုက်ခဲ့တာပါ။ မင်းသားကြီး ဦးပိန် က ရွှေမင်းသား နဲ့ ရိုက်ခဲ့တာ ပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 443
သူရဇော် says: ကိုလုရေ အင်မတန်လက်ရာမြောက်တဲ့ပုံလေးတွေကို ကြည့်ရင်း ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ရပါတယ်…… အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ ……. အော် ဒါနဲ့ လက်မလေးထောင်အားပေးသွားပါကြောင်း
သူရဇော် says: ထောင်စရာမရှိလို့ ရှိတဲ့ဟာကို ထောင်သွားပါတယ်ဗျာ